Espana : Adintsaina Manoloana Ny Herisetran’ny Polisy Mpandrava Korontana · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 18 Novambra 2012 4:50 GMT
[Raha tsy misy fanamarihana hafa, ny rohy rehetra ato dia mankany aminà pejy miteny Espaniola.]
Hatramin'ny nanombohan'ny olana mamely an'i Eoropa amin'izao fotoana, nitombo be ireo hetsi-panoherana any amin'ireo firenena mediteraneana izay tena mizaka izany. Any Espaina, nanomboka [fr] ny 15 mai 2011 ireo hetsika fanoherana goavana, tamin'ny alàlan'ny hetsika 15M, nolazaina ho nataon'ireo “Tofoka“. Ny hetsika tamin'izay andro izay dia niafara tamin'ny fanesorana tamin-kery ireo mpanao fihetsiketsehana nijanona teo amin'ny kianja “la Puerta del Sol” tao Madrid. Ny herisetra nasehon'ireo polisy dia nitondra nankaminà fiketrehana fihaonana faharoa izay nivadika ho filasiana taoriana kely. Ilay hetsika, izay naharitra am-bolana vitsy, dia nitatra tany amin'ny ankamaroan'ireo tanàn-dehibe Espaniola sy tanàn-dehibe Eoropeana [fr] marobe hafa.
Ny Alarobia lasa teo, amin'ny fotoanan'ilay fitokonana faobe nanentanana naerana an'i Eoropa, hetsi-panoherana marobe no nokarakaraina tany amin'ireotanàn-dehibe rehetra tao Espaina. Izy ireny dia samy narahana herisetran'ny polisy avokoa, izay indrisy fa toa lasa fahazarana. Tao Tarragone, toerana izay ny mossos d’esquadra (polisin'ny faritra mizaka tenan'i Catalogne) no tompon'antoka amin'ny filaminam-bahoaka, ankizy iray 13 taona no naratra tamin'ny lohany ary tsy maintsy nentina hopitaly satria nila fanjairana ny ratrany. Ao anatin'ilay lahatsary, imbetsaka nisy nijery, no ahitantsika ny fomba ikapohan'ny polisy iray an'ilay zaza, avy eo roa hafa nively kobay tovovavy, izay tsy mbola ampy taona ihany koa, vavolombelona nahita ny zava-nitranga, izay niteny am-bava nanakiana azy ireo manoloana ny habibiana toy izao.
Ny ray aman-drenin'ilay zaza sy ilay tovovavy dia nametraka fitoriana ireo polisy tompon'antka tamin'ity daroka ity. Tao Barcelone, vehivavy iray tratry ny bala fingotra no mety tsy ho afaka intsony hampiasa ny masony an'ila. Tao Madrid, marobe tokoa ireo herisetra.
Tao Barcelone, vehivavy iray naratra no mety tsy ho afaka hampiasa intsony ny masony an'ila. Sary nakarina tao amin'ny pejy Facebook « AntenapezTV ».
Tao Madrid, vehivavy iray no nianjera tamin'ny tohatra rehefa avy natosiky ny polisy iray. Sary navoaka tao amin'ny pejy Facebook «1 5M: Marcha Bruselas ».
Tao Madrid, polisy maro tamin'ireo mpandrava korontana midaroka tanora iray efa lavo amin'ny tany. Sary navoaka tao amin'ny pejy Facebook « AntenapezTV ».
Tao Madrid, polisy iray mandaka tovovavy, izay ezahan'olona roa hafa arenina. Sary navoaka tao amin'ny pejy « AntenapezTV ».
Ao anatin'ity lahatsary ity, azontsika jerena ny tsy fahafehezan-tena mampivarahontsan'ny polisy iray izay midaroka tsy amin'antony vehivavy iray mpanao fihetsiketsehana.
Miteraka fanehoan-kevitra marobe ety anaty aterineto ny karazana fihoaram-pefy toy izao. Ohatra, Jordi Lucena Pallas manoratra ao amin'ilay pejy Facebook mangataka ny fialàn'i Felip Puig [minisitry ny atitany Katalana] :
Ireny polisy ireny, fony mbola zaza, dia naniry ny ho lasa polisy mba hiaro ny tsara fanahy sy hisambotra ny maditra ve? Hirehareha ny fianakaviany manana azy ireo… Tsy maintsy averintsika jerena ny fandinihana ny adina “psycho-techniques” tsy maintsy ataon-dry zareo ireny mba ho voaray, sy mba hiverenana tombanana koa ireo efa amperin'asa, satria raha tsy mitafy fanamiana izy ireny, araka ny sary sasantsasany, dia azontsika ambara tsotra hoe mahery setra ary dia hatolotsika ho an'ireo mpitandro filaminana mpandrava korontana…
Fanamarihana hafa an'i José Carlos Pérez Silva ao amin'ny pejy « No hay pan para tanto chorizo » :
Raha toa tsy matihanina ry zalahy ireo ary tsy afaka ny mba ho toy izany, dia tokony handeha hivaro-body eny amin'ny Ramblas. Ilay Zanaka makorelina ireto.
Miasa loha betsaka amin'ny herisetra tsy mitsaha-mitombo ataon'ireo hery noheveriny fa tokony hiaro azy ireo ny Espaniola. Mila taona maro ny polisy, iray amin'ireo andrim-panjakana atahorana indrindra sy efa voampanga ampahibemaso nandritra ny fitondrana jadona, mba hamerenany ny fitiavana sy ny fitokisan'ny vahoaka azy. Sary iray, ilàna ezaka mafy tokoa, izay mihamatroka nandritra ny taona vitsy izao noho ny fitondran-tenan'ireo polisy sasantsasany rehefa misy fihetsiketsehana.
Araka ny hevitry ny daholobe, nandritra ireny taona maro ireny, dia nampiditra olona betsaka tsy mahafeno akory ny fepetra ilain'ny asany ny polisy, indrindra fa amin'ny resaka maha-matihanina sy fifehezan-tena, sady tsy mahavaly akory ny fepetra takiana mba hidirana ho fianakaviamben'ny mpitandro filaminana anaty firenena iray Demaokratika.
Toy ny fanamarihana nataon'i El Rey Bufón ao amin'ny pejy Facebook « Ser policía, vergüenza me daría » [« Menatra aho raha ho polisy »]
Lany henatra ny governemanta sy ireo vondron'olom-bitsy tompoiny… Matahotra tsotra izao fotsiny ry zareo… Ary arakaraky ny maha-lehibe ny tahotra, no maha-henjana koa ny famoretana…
Zava-misy iarahantsika rehetra mahita ny hoe takonan-dry zareo hatrany ny laharany, na io polisim-pirenena na an'ny faritra, izay teren'ny lalàna anefa hoe tsy maintsy atao taza-maso, sy ny fisian'ireo mpaka sary marobe, ka tafiditra amin'izany ireo matihanina manan-karatra ara-dalàna, iharan'ny herisetra ary ny hoe herinandro vitsy lasa izao dia nilaza ny tomponandraikitra ao amin'ny polisy fa mieritreritra ny handràra ny fakàna sary an'ireo polisy izy, dia mamahana ny fiheverana fa ny polisy dia maniry ny tsy hahalalàna ny anaran'ireo mpikambana ao anatiny mba hijanonany ho tsimatimanota.
Ampangain'ireo mpanao fihetsiketsehana ny fisian'ireo polisy naiditra an-tsokosoko tany anatin'ireo famoriam-bahoaka ireo, zavatra iray neken'ny sekretera jeneralin'ny sendikan'ireo polisy nandritra ny tafatafa iray nataony ho an'ny gazety Público. Ny olana dia betsaka amin'ny fijoroana vavolombelona no miara-manambara fa matetika dia ireny polisy natsofoka ireny no mitarika amin'ny fifandonana amin'ny mpitandro filaminana mpandrava korontana mba hahafahan'iretsy namany manana antony hamely ireo mpanao fihetsiketsehana.
Amnesty International dia efa imbetsaka no niampanga ity toe-javatra ity. Nandefa fanangonan-tsonia ilay fikambanana mba hangatahana amin'ny minisitry ny Atitany handraisany izay fepetra ilaina manoloana ireo habibian'ny polisy sy mba hiantohana ny fampanarahana ny fepetra ara-pitsipika mifehy raha sanatria misy ny herisetra mitranga.
Ho an'ny maro, mampiahiahy ny fihetsiky ny polisy satria mampahatsiahy ny jadona fony fitondran'i Franco. Ireo olom-pirenena dia matahotra ny tsy hisian'ny fanohanana intsony ity sokajin'asa ity avy amin'ny vahoaka ary ho very ireo fitokisana nosandaina taona maro vao mba azo.
Ireo polisy tamin'ny fotoan'andron'ny jadona sy ireo mpitandro filaminana mpandrava korontan'ny taonjato faha-21. Sary nivoaka tao amin'ny pejy Facebook « AntenapezTV »